Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha DFS oo ka badbaaday qarax loogu rakibay gaarigiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha DFS oo ka badbaaday qarax loogu rakibay gaarigiisa
August 7, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlada federaalka Soomaaliya, Maxamed Xasan Nuux. Sawirka: Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlada federaalka Soomaaliya ayaa caawa ka badbaaday qarax lagu doonayay in lagu khaarajiyo.
Wasiir, Maxamed Xasan Nuux ayaa qaraxa loogu xiray gaarigiisa hoostiisa, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska.
Wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowlada ayaa sheegay inuu nabad qabo.
“Alxamdulilaah, Waan nabad qabaa aniga iyo asxaabtii ila socotay,” ayuu yiri wasiir Nuux.
Sida ay dadka deegaanka u sheegeen warsidaha Puntland Mirror qaraxa oo ka dhacay meel u dhow jidka Maka al-Mukarama, Muqdisho, ayaa waxaa ku dhimatay ilaa labo qof.
Ma jirto cid si deg deg ah u sheegatay masuuliyada qaraxaas, balse kooxda hubaysan ee al-Shabaab ayaa mar walba qaada qaraxyo iyo dilal lidi ku ah saraakiisha dowlada.
August 3, 2016 Siyaasi Salaad Cali Jeele oo sheegay haddii doorashada Soomaaliya ay dhici weydo wakhtigeedii in talada dalka ay la wareegi doonaan odayaasha dhaqanka
July 18, 2016 Madaxweynaha Galmudug oo qaliin wadnaha loogu sameeyay Hindiya